Sawir walbaa sheekuu hayaa - BBC Somali
Sawir walbaa sheekuu hayaa
Sawir walbaa sheekuu sidaa. waxay ka hadlayaan masiibooyinkii caalamka soo maray qaar ka mid ah iyo sawiro kale oo xusuus gaar ah reebay.
Neda Agha Soltan dhimashadeed xilli ay jireeen dibadbaxyo ka dhacay waddooyinka Tehran ayaa si qurux badan loogu qaaday telefoonka gacanta, lana soo galiyay bog internet-ka oo vidoe-yada la isku waydaarsado. waxay noqotay astaan caalami ah oo matasha mucaradka Iran.
On 26 November 2008, rag hubaysan ayaa weeraray hotelka raaxada ee Taj Mahal Palace hotel ee magaalada Mumbai. Waxaa hoteel jira ilaa 105 sano oo astaan u ah magaalada, kuna yaalla bartamaha caasimadda maaliyadeed ee india, waxaana uu hotelku ku caan ahaa dalxiisayasha iyo dadka magaalada madaxdeeda ah.
Sawirle Shepard Fairey waxaa caado u ahayd in uu sawiro siyaasadeed oo dhinaca xun ah ka sameeyo siyaasiyiinta, balse waxaa uu ku dhiiraday in uu sameeyo muuqaalka Barack Obama kadib markii uu ka qaybgalay shirkii 2004 ee xisbiga Demoqraadiga. Muuqaalkan, ayaa noqday mid dhinac socday ololihii Obama ee madaxwaynenimada.
Roman Catholic cathedral ee magaalada Port-au-Prince, si la mid ah dhismayaal kale, way burburtay kadib dhulgariirkii ka dhacay Haiti bishii January 2010. Saraakiishu, waxay sheegeen in ilaa 230,000 ay dhinteen, in ka badan hal million oo qofna ay ku guryo beeleen.
Bartamaha magaalada New York oo burbursan kadib markii laba diyaaradood ay dhexgaleen xarunta ganacsiga adduunka. Daarihii mataanaha ahaa, oo u taagnaa awoodda maaliyadeed ee dalka Maraykanka, ayaa ku burburay saacado gudahood.
Intii u dhaxaysay bilihii April iyo June 1994, dad lagu qiyaasay 800,000 oo qof ayaa lagu dilay muddo ku siman 100 maalmood, wax loogu yeero xasuuqii Rwanda. Dadka la dilay ayaa u badan qowmiyadda Tutsiga, iyadoo inta badan dadka dhibaatada gaystayna ay ahaayeen dadka Huutuuga.
Qarax ka dhacay biyaha badda hoostooda goobta shidaalka 20 April 2010, waxaa ku dhintay 11 shaqaale ah, waxaana uu dhaliyay in shidaal badan oo badda ku qubto guud ahaan Gacanka cadmeed. Madaxwaynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in masiibada shidaal ay Maraykanka ula mid tahay weerarkii 9/11.
Koobka adduunka 2010 ee South Africa wuxuu ku bilowday si la yaab leh iyadoo xaflad qurux badan oo fuirtaan ah loogu qabtay garoonka Soccer City ee magaalada Johannesburg oo qaada ilaa 94 kun oo qof. Waa markii ugu horaysay ee Africa lagu qabto tartanka ciyaaraha adduunka.
Markii ay ku dhacday koox shimbiro ah, ayaa diyaaradan ay awoodii lumisay in yar kadib markii ay garoonka ka kacday. Captain Sullenberger ayaa go'aan ku gaaray in uu diyaaradda ku dajiyo wabiga Hudson ee New York, isagoo badbaadiyay 155 qof.
Dhimashadii Diana, Amiiradii gobolka Wales, waxaa ka dhashay murugo wayn oo UK ah oo dhan ah iyo caalamkaba. Kumanaan dad ah ayaa safnaa wadada la mariyay maalintii la aasayay.
Sanadkii 2004, Wangari Muta Maathai, ayaa nqotay haweenaydii ugu horaysay ee African ah oo lagu abaalmariyay biladda Nobel Peace Prize. Fikradeeda la xiriirta dhiirigalinta in la abuuro geedaha, dhaqdhaqaaqeeda Green Belt Movement - wuxuu astaan u noqday howsheeda.
Masiibada Chernobyl ee sanadkii 1986, wali waxay tahay masiibadii nuclear ee dunida ugu xumayd. Waxaa lagu ogaaday qaabka loo dhisay warshadda ay u sabab ahayd qaybta korontada oo qarax dhalisay, kaasoo keenay in hubku qarxo.
Masiibadii Tsunamo ee Asia oo 26 December 2004, ku dhufatay 13 dal, waxay ahayd mid ka mid ah masiibooyinka dabiiciga ah kuwii ugu xumaa ee soo mara adduunka inta la xusuusto. was one of the worst natural disasters in living memory. Banda Aceh ee dalka Indonesia waxay ka mid ahayd meelaha sida ugu daray loogu dhamaaday, in ka badan 100,000 qof, ayaa ku dhintay.
Idama Dolly, waa xayawaankii ugu horeeyay ee laga soo minguuriyo ido kale machadka Roslin ee Scotland sanadkii 1996. waxaa loogu magacdaray heesaaga Dolly Parton.
Quusidii Belgrano, waxay ahayd dhacdadii ugu khilaafka badnayd ee dalkii Falkland ee sanadkii 1982 ee u dhaxeeyay UK iyo Argentina. Dad badan oo ku nool Britain - siyaasiyiin iyo dadwaynaha guud - in ay ahayd isticmaal awoodeed oo laga maarmi karay.